HEWU! Cape Town Amazinyo Amhlophe | 200+ Ukubuyekezwa Kwezinkanyezi Ezinhlanu
I-OptiSmile WOW! - Amazinyo Amhlophe Eduze Kwami EKapa. Ikhaya Lekhithi Emhlophe Yokucwenga Kwamazinyo Ekhaya Engcono Kakhulu eNingizimu Afrika kanye Nezinketho Zokungena Esitulweni Ezichwepheshile
"Ngibe nesipiliyoni esihle kakhulu e-OptiSmile Sea Point namuhla. Benze umsebenzi ongakholakali ekungenzeni abe mhlophe amazinyo. Ngijabule kakhulu ngemiphumela! Ngizobuya nakanjani! Ngiyabonga Clifford kanye neThimba!"
Isebenza Kanjani I-Whitening?
Funda mayelana nokwelashwa kokumhlophe kwe-flagship WOW! Indlela yokwenza mhlophe. Ibanga lomkhiqizo eliqhutshwa ngokwesayensi elisetshenziswa i-OptiSmile nokuthi konke kusebenza kanjani ndawonye ukuze kukhanye ukumamatheka kwakho ngamathunzi angafika kwangu-9. Amazinyo ezingeni le-Pro ngesikhathi sokurekhoda.
Imiphi Imikhiqizo Emhlophe?
Funda ngamasevisi ahlukahlukene ahlanganiswa emhlabeni omangalisayo wobudokotela bamazinyo bezimonyo. Ukwelashwa kwethu okuphambili kwe-ABC, idizayini yokumomotheka kwedijithali, izigxivizo zamazinyo, izifakelo zamazinyo kanye nendlela esikushintsha ngayo ukumamatheka ukusuka kuqanda ukuya kuqhawe.
Imiphumela Yokuba Amazinyo Abamhlophe!
Imiphumela yokuba mhlophe kwamazinyo iyahlukahluka kuye ngesiguli. WOW wethu! Inqubo yokwenza mhlophe iqinisekisa ukushiya ukumamatheka kwakho kusesimweni esingcono kakhulu kunangaphambili futhi zonke iziguli zethu zibona imiphumela emangalisayo ngokwelashwa.
Izindleko zokucwenga amazinyo?
I-OptiSmile iguqule inqubo yokwenza amazinyo akho abe mhlophe. Amaphakheji ethu okwenza mhlophe amazinyo akhelwe endaweni ekahle kanye nenani elingcono kakhulu lezidingo zakho. Landa umhlahlandlela wethu wokwenza amazinyo abe mhlophe ngezansi.
Usebenza Kanjani Amazinyo Amhlophe?
Amazinyo kuphela ama-agent amhlophe angasusa amabala angaphandle anenkani kanye namabala angaphakathi abangela amazinyo akho ukuthi abukeke eshintshile.
Amabala emazinyweni angahlukaniswa ngezindlela ezimbili: angaphandle noma angaphakathi. Amabala angaphandle avela ebusweni bamazinyo akho. Amabala angaphakathi ahlala phakathi kwama-microcracks koqweqwe lwawo futhi ekujuleni kwe-dentin yakho (ungqimba lwezinyo lakho ngaphansi koqweqwe lwawo). Izixuku zokuxubha ezimhlophe nezihlanza umlomo zingakwazi ukususa amanye amabala angaphandle emazinyweni akho.
Akuyona imfihlo ukuthi umlomo ogcwele amazinyo amhlophe uhlinzeka ngezinzuzo, okusobala kakhulu - ukumamatheka okukhanya ngokwengeziwe. Amabala noma ukushintsha kombala kuvame ukudambisa ukumamatheka kwakho, ngakho-ke noma ngabe uhleka kangakanani noma uhleka ngokusuka enhliziyweni, ukuzwakalisa kwakho kushoda ngalutho. Amazinyo amhlophe abuyisela lesi sici esilahlekile ekuzethembeni kwakho.
Enye inzuzo esobala yileyo yokuba nempilo engcono yomlomo. Ngokususwa kwamabala ngesikhathi sesikhathi sobungcweti bochwepheshe, amazinyo akho angaqina futhi abe nempilo, okwandisa impilo yonke yezinsini zakho neyomlomo wakho wonke. Esinye isizathu esivamile sokuba mhlophe kwamazinyo umthelela ongaba nawo empilweni yakho yothando.
WOW OptiSmile! Isixazululo esimhlophe sisekelwe kwisayensi hhayi ekuthengiseni. Umsebenzi wethu siwuqonda ngokuzethemba ukuthi izindlela esizisebenzisayo ukwenza amazinyo abe mhlophe ziyasebenza futhi ziphephile ezigulini zethu.
Imiphi Imikhiqizo Yokucwenga Amazinyo Esiyisebenzisayo?
I-In-Office Whitening nge-Opalescence BOOST!
Enye yezindlela ezinamandla kakhulu zokwenza amazinyo abe mhlophe, i-Opalescence BOOST ikuvumela ukuthi ube nochwepheshe wamazinyo we-OptiSmile ukuze usebenzise lesi sixazululo sokumhlophe kwamazinyo ehhovisi emsebenzini wethu omangalisayo wamazinyo e-Sea Point.
Kwaziwa kahle ukuthi ungenye yezinketho ezingcono kakhulu zokucwenga amazinyo ngaphakathi kwebanga le-Opalescence ungaba nokumamatheka okukhanyayo, okungokwemvelo okwengeziwe ngaphansi kwehora! Lokhu kuvumela abantu abaseshejulini eqinile ukuthi bakhulise amazinyo abo amhlophe imiphumela ngesikhathi esifushane.
Izinzuzo zale nketho yokwenza amazinyo abe mhlophe ukuthi isetshenziswa ngokucophelela ngudokotela wamazinyo we-OptiSmile futhi okusho ukuthi yenziwe yasebenza ngokwekhemikhali asikho isibani se-UV esishisayo esidingekayo ukuze kusheshiswe inqubo. Ijeli yokuhlanza izinyo iqukethe i-PF / Potassium nitrate kanye ne-fluoride egcina impilo yoqweqwe lwawo ngesikhathi sokwenza mhlophe.
Imiphumela phakathi nehora elingu-1 iyamangalisa amazinyo akho aba mhlophe kufika ku-8 noma 9 shades!
Thatha Ikhaya Elimhlophe nge-Opalescence PF!
Ukwenziwa mhlophe kwamazinyo ekhaya sekuphenduke izinga lokusebenziseka elifunwa kakhulu elihlinzeka ngemiphumela ehlukile futhi elingahlanganisi noma iyiphi ingxenye yekhwalithi. Kulula kakhulu ukwenza amazinyo abe mhlophe ekhaya ngalo mkhiqizo omangalisayo futhi ngezinyathelo ezimbalwa ezilula uzoba nokumamatheka okukhazimulayo okuzokhanyisa igumbi.
I-Opalescence take-home whitening gel ilungele abantu abafuna izinketho eziningi. Ngokugxila okune okuhlukene nama-flavour amathathu, ungakwazi ukugqoka i-Opalescence okungenani imizuzu engama-30 ngosuku—noma ubusuku bonke! Inikezwa uchwepheshe wamazinyo onelayisensi kuphela, ijeli emhlophe ye-Opalescence yokuthatha ekhaya ikuvumela ukuthi uthole imiphumela yokwenza mhlophe yobungcweti ngesikhathi esivumelana nawe ngendlela ephephile, ephumelelayo, futhi eyenziwe ngokwezifiso!
Ibhekwa njengendlela elula yokwenza amazinyo abe mhlophe ikhithi yokuyisa ekhaya yakhiwe ukuze kuvinjwe ukuphelelwa amanzi emzimbeni kanye nokubuyela emuva komthunzi, kukhona ukugxila okune kokuvumelana nezimo ekwelapheni futhi iza ngama-flavour amnandi angu-3 okuhlanganisa i-mint, ikhabe noma evamile.
Imiphumela Yokuba Amazinyo Amhlophe EKapa
Izinyathelo Ezilula Eziya Emazinyweni Amahle Amhlophe
Amazinyo aphezulu kuphela aphathwayo ngesonto lokuqala. Kufakiwe ukulandelela ngesonto elilodwa ukuze ubone ukuthi uqhuba kanjani. HEWU! akulona uhlelo olumhlophe olulingana konke. Senza ngendlela oyifisayo ukwelashwa kwakho ngokugcwele.
Amazinyo aphansi angase athambekele ekubeni nokuzwela kanye nama-zingers, futhi lokhu kungakubeka ekwelapheni uma usebenzisa ukugxila okuphezulu. Ukunethezeka kwakho kuyinto eza kuqala kithi lapha kwa-OptiSmile.
Amazinyo aba mhlophe ngezinga elihlukile kumuntu ngamunye, futhi okuwukuphela kwendlela enokwethenjelwa yokubona ukuthi ukwelashwa okunqunyiwe kusebenza ngokushesha futhi kanjani iwukuqhathanisa amazinyo angaphezulu naphansi ngemva kwesonto elilodwa.
Ngemuva kweviki lokuqala lokuqala, udokotela wamazinyo anganikeza amanye amasonto ama-2-4 ngenhla nangaphansi, noma kufika ezinyangeni ezi-3 ngokuya ngesimo sakho
HEWU! akuxhomekile ohlotsheni oluthile noma ekugxiliseni ingqondo. HEWU! akuxhomekile ku-hype yokumaketha. HEWU! isekelwe kuphela kwisayensi yamazinyo yamanje.
HEWU! iziguli zizuza ngazo zonke izindlela uma ziqhathaniswa nezinye izinketho ezitholakalayo. Sakhe amaphakheji ama-3 ukuze alingane nezidingo zomuntu ngamunye ofuna ukumamatheka okugqamile.
Amazinyo Amhlophe EKapa FAQ
Imikhiqizo yokwenziwa mhlophe kwamazinyo isiza ukususa amabala angaphezulu nokuqhekeka kombala kepha awushintshi umbala wamazinyo uqobo. Lokhu kungaba yinoma yini kusuka kumuthi wokuxubha kuya ekuhlanzweni kochwepheshe ngomuntu ohlanza umlomo wakho.
Ukuhlanza kuyinqubo yamakhemikhali eshintsha umbala wangaphakathi wamazinyo, iwakhanyise futhi ithuthukise ngendlela ephawulekayo indlela abukeka ngayo.
Ayikho into ebizwa ngokuthi usayizi owodwa ulingana nayo yonke inqubo yokuphuma mhlophe, futhi umuntu ngamunye kufanele abe nohlelo olukhethekile lokuhlanza oluzofanela yena kanye namazinyo akhe.
Uma usuwenze waba mhlophe “abamhlophe abamhlophe” bakho, bazodinga ukunakekelwa, futhi kubalulekile ukunakekela ikhaya usebenzisa amathreyi e-bleaching angokwezifiso kanye nenhlanzeko yomlomo.
Kodwa-ke, ukwenza lokhu ngudokotela wamazinyo oqeqeshiwe usebenzisa imikhiqizo esezingeni eliphezulu yokwenza mhlophe amazinyo kusho imiphumela ehlala isikhathi eside ngaphandle kokulimala futhi incane ngokungaphatheki kahle.
I-bleaching inqubo yamakhemikhali eshintsha umbala wangaphakathi wamazinyo, iwakhanyise futhi ithuthukise kakhulu indlela abukeka ngayo.
Ayikho into ebizwa ngokuthi usayizi owodwa ulingana nayo yonke inqubo yokuphuma mhlophe futhi umuntu ngamunye kufanele abe nohlelo olungokwezifiso lokufiphaza olufanele yena kanye namazinyo akhe.
Ukuze kugcinwe ubuhle obumhlophe beparele iminyaka ezayo, kubalulekile ukwenza ukunakekelwa kwekhaya kusetshenziswa iCustom Gel Retainers kanye nenhlanzeko yomlomo.
Kodwa-ke, ukwenza lokhu kahle ngudokotela wamazinyo oqeqeshiwe usebenzisa imikhiqizo esezingeni eliphezulu yokwenza mhlophe amazinyo kusho imiphumela ehlala isikhathi eside ngaphandle kokulimala futhi incane ngokungaphatheki kahle.
Yini Ebangela Ukuchithwa Kwamazinyo?
Izizathu ezivame kakhulu ukuthi amazinyo akho aphuzi noma anamabala yilezi:
Ukusetshenziswa kweziphuzo ezinombala omnyama njengekhofi, itiye newayini elibomvu
Ukuhlanzeka kwamazinyo okungafanele
Ukuguga nakho kwenza amazinyo angakhanyi kangako ngoba koqweqwe lwawo lwamazinyo luba mncane futhi i-dentine iba mnyama. Kungenzeka futhi ukuthi ube namabala ngaphakathi kwezinyo elibizwa ngokuthi amabala angaphakathi, angabangelwa ukuhlukumezeka ngokomzimba kuya emazinyweni akho noma ukuvezwa yimithi elwa namagciwane ngesikhathi useyingane.
Yiziphi Izinhlobo Zama-Whitening Whitening Systems Ezikhona?
Phezu kwe-Counter (okugcoba umuthi wokuxubha kanye nemichilo)
Le mikhiqizo izosiza ngokususa amabala angaphezulu kuphela futhi iningi ngeke liguqule umbala wamazinyo akho. Imikhiqizo eminingi phezu kwekhawunta ine-asidi kakhulu futhi ingadala umonakalo omkhulu emazinyweni akho nasezinhlelweni zokusekela, kanye nokugcwalisa/ukubuyisela kwakho.
Uchwepheshe wakho wamazinyo uhlale engumuntu ongcono kakhulu ongambuza uma kuziwa kokuthi yimuphi umkhiqizo okufanele uwusebenzise. Imikhiqizo ecwebezelayo yokwenza mhlophe ethengiswa odokotela bamazinyo nabahlanza ngomlomo, njengezixuku zokuxubha neziwasha emlonyeni iphephe kakhulu emazinyweni akho kunezinye izindlela ezingasetshenziswa uma usebenzisa ikhawunta.
Noma yimiphi imikhiqizo engenziwanga ukuthi ilingane nomlomo womuntu ingadala umonakalo omkhulu ezinsini kanye nasemazinyweni, ngisho noma ingenayo i-hydrogen noma i-carbamide peroxide.
Ukwelashwa kokuthatha ikhaya (ukwenza mhlophe ngokomsebenzi usebenzisa amathreyi enziwe ngokwezifiso)
Le nketho idinga i-aphoyintimenti nodokotela wamazinyo ukuze wenze ngendlela oyifisayo uhlelo lokufiphaza ukuze lufanele wena nobabili amazinyo akho. Kuzohlanzwa, kulandelwe yimibono yamathreyi amhlophe okuyisa ekhaya.
Lezi ngokuvamile zithatha cishe amahora angu-24 ukuzilungiselela nokwenza. Uyobe usunikezwa imijovo engu-2-3 yejeli ozoyisebenzisa emazinyweni angenhla isonto lonke, ngaphambi kokuba ubuye ukuyohlola imiphumela kanye nejeli eyengeziwe okufanele inqunywe.
Isizathu sokugcoba emazinyweni akho sizonquma amandla ejeli ye-peroxide okufanele isetshenziswe kanye nobude besikhathi ozosidinga ukuze wenze i-bleach.
Umuntu oyedwa angase azuze imiphumela ayifisayo emasontweni amabili esebenzisa i-Peroxide imizuzu engu-30 ngosuku, kanti omunye angase adinge ukuqhubeka kuze kube yizinyanga ezingu-3 ukuze azuze imiphumela ayifisayo.
Kuphephe ngokuphelele ukuqhubeka nokuba mhlophe isikhathi esengeziwe inqobo nje uma amazinyo esashintsha umbala. Udokotela wethu wamazinyo uzokubona njalo ngalesi sikhathi ukuze aqinisekise ukusetshenziswa okulungile komkhiqizo futhi akusize ngohlelo lwakho lokuxubha ngokuthatha izithombe ngaphambi nangemuva kwezithombe kanye nezithunzi futhi aqaphe ukuqhubeka kwakho.
Kuzodingeka ugweme noma yikuphi ukudla neziphuzo ezingangcolisa itop emhlophe kuze kube ihora ngemva kweseshini ngayinye yokuphuma mhlophe ekhaya.
Sinikeza ukumhlophe kwesihlalo njengengxenye ye-OptiSmile WOW! Isistimu kanye nezinketho zokuthatha ekhaya kuphela zokumhlophe (ukuhlanza).
Imiyalo yokuhlanza ekhaya futhi iyahlukahluka kumuntu oyedwa kuye komunye kuye ngohlobo lwamabala esibhekene nawo.
Ukwenziwa mhlophe kwekhaya okuhamba kancane kancane umuntu angakwenza kuhlanganiswe nokuba mhlophe esitulweni kuba mhlophe umbala nokubamba isikhathi eside kanye nomphumela uzinze kakhudlwana. Lokhu kusho futhi ukunakekelwa okuncane ngokuhamba kwesikhathi.
Cabanga ngokulahlekelwa ngamakhilogremu angu-30 futhi ulindele nje ukuzixhumela emshinini bese ucabanga ukuthi izinkinga zakho sezixazululiwe. Uma inqubo ihamba kancane futhi kancane kancane iba yinde imiphumela.
Ingabe Ukuhlanjululwa Kwamazinyo Kulimaza?
Ikesi ngalinye elimhlophe kufanele lenziwe ngokwezifiso ukuze livumelane nomuntu namazinyo akhe. Uma unokuzwela ngaphambi kokuba kube mhlophe amathuba okuthi uzobhekana nakho kancane phakathi nenqubo. Kukhona futhi namajeli asusa ukuzwela atholakalayo futhi angasetshenziswa ngaphambi nangemuva kokuba mhlophe.
Ukuzwela kungalawulwa udokotela ngokuqale akunikeze i-UltraEZ™ Desensitizing Gel noma i-Pola Soothe. Uhlobo lokuya ekhaya mhlophe nalo lubalulekile ukuze unciphise noma yikuphi ukuzwela. Isikhathi sokugqoka siyisici esikhulu ekuzweleni - yehlisa lokhu ngokwandisa iphesenti yejeli yokuyisa ekhaya, futhi ungagqoka amathreyi okuyisa ekhaya, isb imizuzu engama-30 ngesikhathi.
Uma uhlangabezana nanoma yikuphi ukuzwela, kungokwesikhashana, ngokuvamile amahora ambalwa nje futhi kuphele nya. Ijeli elimhlophe langempela lingena lize lifike enkabeni yezinyo lapho inzwa ikhona, ngakho akusho ukuthi kukhona okungalungile. Iningi labantu alizwani nalutho.
Ngabe Kusebenza Imichilo Nezibaya Zamazinyo?
Ukwenza mhlophe okuphrofeshinali kushintsha umbala wamazinyo akho kuyilapho amapeni abe mhlophe nemicu ngokuvamile kuncibilikisa amabala angaphezulu futhi kungase kushintshe umbala ngobuningi bemithunzi engu-1 noma emi-2.
Impela ziyimikhiqizo “eyenza ibe mhlophe” esikhundleni sokufiphalisa umsebenzi. Zilungele ukulungiswa lapho umphumela owufunayo usuzuziwe.
Qaphela imicu ene-hydrogen peroxide ephezulu njengoba iqondile futhi ayenzelwanga ukuthi ilingane amazinyo/umlomo wakho futhi ingadala umonakalo omkhulu ezinsini.
Ingabe i-OptiSmile Inikezela Ukubonisana kwamahhala kokumhlophe?
I-OptiSmile inikeza ukubonisana kwamavidiyo kwamahhala nodokotela wamazinyo kuqala bese kuthi lapho uzongena esivivinyweni nanoma yimaphi ama-xray adingekayo, uzohlolwa ngaphandle kwenkokhiso ngamazinyo amhlophe.
Ingabe Ukopha Kuyenza Amazinyo Akho Azwele?
Ukuhlanza kuhlukile ekubeni mhlophe ngoba ushintsha umbala wangaphakathi wamazinyo hhayi nje ukususa amabala angaphezulu.
Ukuze wenze lokhu, udinga ukusebenzisa i-hydrogen noma i-carbamide peroxide engena ezinyoni futhi ikhiphe umbala wama-molecule angcolile abanjwe ekujuleni kwezinyo, aqonde ngqo kumthambo.
I-nerve ingavuseleleka, futhi ungase ube nokuzwela okuthile amahora ambalwa, kodwa lokhu kungalawulwa uchwepheshe wakho wamazinyo kakhulu.
Ungase futhi uthole amajeli aqeda amandla ukuze uwasebenzise ekhaya, kodwa ngokuvamile lokhu kungavinjelwa futhi kwenziwe ngokwezifiso esigulini ngasinye. Ukuhlanza akuwona usayizi owodwa olingana nayo yonke indlela, futhi umuntu ngamunye kufanele abe nohlelo lwangokwezifiso olunqunywe udokotela wamazinyo.
Ingabe i-OptiSmile Inikeza Ukusondeza! Mhlophe amazinyo?
Cha! I-OptiSmile ingomunye wabahlinzeki abakhulu bokucwenga amazinyo eKapa. Ngocwaningo lwethu kanye nokuhlolwa okubanzi komkhiqizo sithole ukuthi i-Opalescence teething mhlophe ibanga yenza zonke ezinye izinhlobo emakethe.
Ingabe Ukulimala Kwamazinyo Kubanga Ukulimala?
Ukwenza mhlophe okuphrofeshinali kuvame ukufaka imikhiqizo egunyazwe izinhlangano zamazinyo zamazwe ngamazwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho monakalo ezinyo.
Uma umuntu efinyelela umphumela wabo wokuba mhlophe omkhulu futhi eqhubeka nokuba mhlophe, yilapho ungabangela khona umonakalo. Kubalulekile ukulandela imiyalelo evela kuchwepheshe wakho wamazinyo maqondana nokuzuza nokugcina imiphumela yakho yokufiphaza/yokuba mhlophe.
ENingizimu Afrika, akukho emthethweni kunoma ubani ngaphandle kukadokotela wamazinyo noma udokotela wezokuhlanzeka ukusebenzisa le mikhiqizo.
Yini okusebenza kahle kakhulu? In-Chair Whitening noma Thatha Ikhaya?
Ngokuya ngamazinyo akho, kokubili ongakhetha ukuya ekhaya kanye nesihlalo kungafinyelela ubumhlophe obukhulu.
Kokubili ukwenza mhlophe okuyiswa ekhaya nokumhlophe esitulweni kudinga ukwenziwa ngendlela oyifisayo ukuze kufane nomuntu ngamunye futhi osesihlalweni kumele kuhlanganiswe nokuba mhlophe okuya ekhaya ukuze kuqinisekiswe ukuthi umbala uyabamba futhi ukuze ukwazi ukugcina umbala ekhaya nyanga zonke.
Ukuhlanza ekhaya kungase kuthathe isilinganiso samaviki ama-4-6, futhi uma wenza mhlophe kakhulu esitulweni, umsebenzi wesikole wesikole uyancipha okudingeka uwenze. Uma imiphumela isizuziwe kulula ukugcina umbala ubukeka umuhle emizuzwini engama-30 kanye ngenyanga ekhaya
Malini WOW! Izindleko zokwenziwa mhlophe?
Sicela ubhukhe ukubonisana kwakho kwamavidiyo wamahhala ukuxoxa ngayo yonke imininingwane.
Hlobo Luni Lwemiphumela Engingalindela?
Kuvamile ukuzuza imiphumela 6-8 shades lighter. Kuya ngokuthi unaluphi uhlobo lwebala; uchwepheshe wakho wamazinyo uzoxoxa nawe okwengeziwe ngesikhathi sokuhlolwa kwakho.
Wonke umuntu ufinyelela umphumela ohlukile, futhi abantu abangu-2-3% kuphela abazothola ubumhlophe be-"Hollywood" ngokuphuma mhlophe kuphela. Amazinyo awahloselwe ukuba akhanye ebumnyameni, ngakho-ke usazoba nokubukeka okungokwemvelo ngemva kokuba mhlophe kwakho, kodwa imiphumela emhlophe idinga ukucwengeka okwengeziwe.
Udinga njalo ukwenza i-bleach kuqala bese uqondanisa umsebenzi wamazinyo omusha nomphumela oyifunayo kunokuba uzame ukufanisa umbala wakho wezinyo nomsebenzi obenza babe mhlophe ngendlela engavamile. Wonke umuntu unendawo ehlukile yokuba mhlophe lapho amazinyo eyeka ukushintsha umbala.
Kulapho-ke kudingeka uyeke ukushibilika futhi ungene ekunakekeleni ukuze ugweme ukulimala kwezinyo ngokwalo, okungesinye nje isizathu sokuqinisekisa ukuthi unodokotela wamazinyo ochwepheshile okuqondisayo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni.
Ngabe Ngidinga Ukuhlanzwa Kwamazinyo Ukuthola Amazinyo Amhlophe?
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, amazinyo akho kufanele angabi nawo noma iyiphi i-plaque. Impilo yomlomo ihlala iza kuqala. Awukwazi ukwenza mhlophe uma unesifo sezinsini noma izindawo ezinkulu zokubola, isibonelo.
Ukugcwaliswa okuningi okuncane kungavinjelwa futhi kunakekelwe ngemuva kokwenziwa mhlophe, kodwa izindawo ezinwebeka kakhulu zokubola zingagcina zibangele ubuhlungu obukhulu kanye nezinkinga ngemizwa uma zinganakwa.
Uma isikhathi sivuma, siphakamisa ukuthi kuhlanzwe isonto noma amabili ngaphambi kokuba kube mhlophe ukuze izinsini zikwazi ukuzinza, kodwa kwezinye izimo, lokhu kungenziwa ngosuku olufanayo nokumhlophe.
Kuthatha isikhathi eside kangakanani?
Lokhu kuncike ohlelweni olwenzelwe wena ngokwezifiso. Kungathatha isonto lokwenziwa mhlophe ekhaya izinyanga ezi-3 zokwenza mhlophe ekhaya. Ikhithi ngayinye isebenza ngokuhlukile; ngakho-ke, kufanele ubonane nodokotela wamazinyo ofanelekayo ngaphambi kokuthatha isinqumo sokwenza okuthile.
Umhlahlandlela wakho we-WOW! Intengo Emhlophe
Chofoza ukuze uthole izikhombisi-ndlela